Madaxweynaha Somaliland Oo Qaabilay Wefti Ka Socday Midowga Yurub | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweynaha Somaliland Oo Qaabilay Wefti Ka Socday Midowga Yurub
Hargeysa (SDWO.com): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wefdi ballaadhan oo ka socda midowga reer Yurub oo uu hoggaaminayo Ambassador Fulgencio Garrido oo ah ku xigeenka wakiilka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Somaliland iyo Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo wefdigu waxay ka wada hadleen isbedelada siyaasadeed ee ka socda geeska afrika iyo sidii uu u noqon lahaa mid nabadeed oo wax wanaagsan ku soo kordhiya mandaqa.
Waxa kaloo kulankaa lagu soo qaaday dhismaha wadada Berbera Corridor ee isku xidhi doonta Berbera iyo wajaale sidii ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen midawga yurub.
Waxa kaloo kulankaasi laga wada hadlay qabsoomida doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka, isagoo madaxweynuhu u sheegay weftiga in ay xukuumaddu dhinaceeda mar hore iska dhamaystirtay wixii looga baahnaa ee dhinaceeda ku xidhnaa.
Ugu danbayntiina waxa kulankaasi lagu soo qaaday wada hadaladii hore u dhexmaray Somaliland iyo Soomaaliya, sidii loo soo celin lahaa oo uu madaxweynuhu u sheegay xubnaha weftiga in ay Somaliland mar walba ka go’antahay inay hirgalaan wada hadaladu.
Balse ay Soomaaliya ka jeceshay hagar-daamada iyo Turan-turada qarannimada Somaliland oo ay ku foogan tahay, waxaanu sheegay madaxweynuhu in aanay Soomaaliya marnaba diyaar u ahayn in la furo wada hadalada labada dhinac.